Madaxweyne Trump oo Saxiixay Xayiraad Lagu Soo Rogey Ruushka – Radio Daljir
Agoosto 3, 2017 8:58 b 0
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay xayiraad cusub la saarayo dowlada Ruushka, kadib markii aqalka Koongareeska dalkaasi uu meel mariyay in cunaqabateyn cusub lagu soo rogo Ruushka.
Cunaqabateynta Ruushka la saaray ayaa la sheegay in sabab looga dhigay faragalin uu ku sameeyay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka iyo sidoo kale ku lug lahaanshaha Dowlada Ruushka colaada ka aloosan dalka Ukrine.
Madaxwene Donald Trump ayaa saxiixa qaanuunkaan xayiraada lagu saara Ruushka, uga fogaaday waji gabax uu kala kulmi lahaa Koongareska haddii uu diidi lahaa kuwaasi oo codka diidmada qaxayan u qaadi lahaa.
Dhinaca kale Ra’isal wasaaraha Ruushka, Dmitry Medvedev, ayaa sheegay in cuno qabataynaha cusub ee Maraykanku ku soo rogay dalkiisu ay ka dhigan yihiin in dalkaasi ku dhawaaqay dagaal cad oo xagga ganacsiga ah.
Medvedev oo ka carooday Cunaqabateynta ayaa sheegay in talaabadaasi muujinayso karti darrada maamul ee madaxweynaha Maraykanka, oo uu ku sheegay in uu Congress-kii dulleeyey, waxa uuna ku tilmaamay tilaabada Dowlada Mareykanka qaada mid aan laga fiirsan.
Nin Maalin Walba Xafiiskiisa Shaqada Diyaarad Ku Aada (Sawirro)